यस्तो आलु खाँदा ख्याल गर्नुहोस्, वि’ष खाए बराबर हुनेछ ! - Sidha News
यस्तो आलु खाँदा ख्याल गर्नुहोस्, वि’ष खाए बराबर हुनेछ !
काठमाडौं। आलु भान्सामा अनिवार्य रुपमा पाइने परिकार हो। आलु, अन्य सागसव्जी, तरकारीमा मिसाएर मात्र नभइ तरकारी बनाएर उसीनेर तारेर आदी विभिन्न तरिकारले पकाउन सकिन्छ ।
चाउरि परेको आलु